မွေးကင်းစကလေးအဘို့အ glycerine အတွက် Borax
မွေးကင်းစအတွက်မကြာခဏခံတွင်း၌ထင်ရှားစေခြင်းငှါ thrush , ထို thrush ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအလေးအနက်မယ့်ထုတ်ဖေါ်ပေမယ့်နေဆဲအလွယ်တကူရောဂါကုသမှုလိုအပ်သည်။ ပါး, အာခေါင်နှင့်သောလျှာသည်များ၏အတွင်းစိတ်မျက်နှာပြင်တစ်အဖြူရောင်ပွင့်နှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအစက်အပြောက်တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစည်းပြီးတော့, အရွယ်အစားတိုးပွါး။ အချိန်ကတဆင့်အဲဒီကိုတွေ့ရှိရပါသည်သောအရပ်တို့ကိုမနို့ suckle နှင့်မျိုမှအတော်လေးနာကျင်ဒါကြောင့်ခက်ခဲကလေးဖြစ်လာသည်။
မွေးကင်းစအတွက် Stomatitis အမြဲတမ်းခံတွင်း၏ချွဲအမြှေးပါး၏မြို့သားတို့, လိင်အင်္ဂါ, အူနေသောတဆေးကဲ့သို့မှို, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အများစုကတော့, ဒီဖန်းဂတ်စ်ရောဂါကြောင့်လျှော့ချကိုယ်ခံစွမ်းအားမှအဖြစ်ပဋိဇီဝဆေးကိုလက်ခံရရှိလူနာအတွက်မွေးကင်းစကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တခါတရံမှာ stomatitis အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနာရီအတွင်းအချိန်မတန်မီကလေးထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါ၏မိခင် glycerine အတွက် stomatitis အသုံးပြုမှု borax (- ဆိုဒီယမ် tetraborate မှတ်ပုံတင်အမည်) နှင့်အတူကလေးများကုသရန်။ ထိထိရောက်ရောက်တစ်ဦးမှိုကနေ mucosa ဖယ်ရှားပေးအတိုင်းဤ medicament တစ်ဦးပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သားသမီးတို့အဘို့ glycerin နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းက၎င်း၏ Re-ဖြစ်ပျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသည်။
ရိုးရှင်းတဲ့က glycerol အတွက် borax အသုံးပြုခြင်း၏နည်းလမ်း, ထိရောက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်က၎င်း၏ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရှင်းပြပါ။ သုံးလေးကြိမ်တစ်နေ့လျှင် grudnichka ပါးစပ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်ပေမယ့်ညင်ညင်သာသာအရောအနှောထဲမှာစိမ်နေတဲ့ဝါဂွမ်း swab သို့မဟုတ်ပတ်တီးတွေနဲ့သုတ်သငျ့သညျ။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကာလ၌, သင်တိုးတက်မှုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဆိတ်သငယ်ကိုမျိုဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကိုသင် glycerine အတွက် borax မသုံးနိုင်ခင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်မြင်နိုင်လက္ခဏာတွေပျောက်ဆုံးအားလုံးတဆေးကိုဖကျြဆီးဖို့ပါးစပ် mucosa နှင့်အတူ lubricated ရပါမည်ပင်ပြီးနောက်ဆိုတာကိုသတိရ။
ယနေ့မွေးကင်းစကလေးအဘို့အ glycerine အတွက် borax ၏အသုံးပြုမှု ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံအတော်လေးတက်ကြွဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာယုံကြည်နေသည် မူးယစ်ဆေးဖြေရှင်းချက်အဆိပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။ ဒီနေသော်လည်း glycerine အများအပြားကလေးအထူးကုအတွက် borax လေးတွေ assign မှဆက်လက်။ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာမလုံလောက်, hypersensitivity, မတည့်တုံ့ပြန်မှု (အဖု, ယားယံခြင်း, နီခြင်း): အပြင်, borax က glycerol အောက်ပါ contraindications ရှိပါတယ်။
ဆိုဒီယမ် tetraborate ၏ညျသငျ့လျြောနှင့်အတူသံသယရှိလျှင်, မိခင်များအားဖြင့် check လုပ်ထားစဉ်မြေးဆက်ကိုသုံးပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိုက်ကျွေးပြီးနောက်ဆိုဒါဖြေရှင်းချက်ထဲမှာစိမ်မြုံပိတ်ကျဲစ (ဆူရေခွက်ကိုတစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးဇွန်း) နဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်, ပါးစပ်အစအန Wipe ။ ကလေး၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုပြု။ ပုလင်းများနှင့်ညည်း boric acid ကို (2%) ၏အဖြေတစ်ခုနဲ့ကုသ, နှင့်အသုံးပြုမှု parboiled မီ။
ကလေးပါး froze - ဘာလုပ်ရမှန်း?
ကလေးတွေအတွက်အစားအစာဓာတ်မတည် - တစ်ဦးချင်းစီ mom, သိကြရမည်ဖြစ်သည်ရသောအကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှု,
ကျွန်မအိမ်သူအိမ်သား stephanotis ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် - နိမိတ်လက္ခဏာများ
ဟင်းချိုစွပ်ပြုတ် - ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများအရသာနှင့်ဖြည့်ဆည်းပထမဦးဆုံးသင်တန်း
ကိုယ်ဝန်3ပတ်ကြာ - အသီးအရွယ်အစား